Wafti ka Kooban Saraakiil Ciidan iyo Wasiiro Dawlada Dhexe oo Yimid Jigjiga – Rasaasa News
Wafti ka Kooban Saraakiil Ciidan iyo Wasiiro Dawlada Dhexe oo Yimid Jigjiga
Feb 24, 2012 ethiopia, Somali, Wafdi ka Kooban Saraakiil Ciidan iyo Wasiirka Arimaha Dawladaha oo Yimid Jigjiga
Jijiga, February 24, 2012 [ras] – Waxaa shalay ka degay garoonka diyaaradaha ee magaalada Jijiga, xarunta degaanka Somalida Ethiopia, wafti balaadhan oo isugu jira wasiiro dawlada dhexe iyo saraakiisha ugu sareeya ciidamada Ethiopia.
Waftigan waxaa garoonka diyaaraha ku soo dhaweeyey madaxweynaha iyo masuuliyiinta dawlada degaanka Somalida Ethiopia, waxaana loo galbiyey guryaha martida ee magaalada Jijiga.
Wali wax faahfaahin ah lagama soo saarin u jeedada socdaalka watiga balaadhan ee isugu jira wasiirada dawlada dhexe iyo saraakiisha sare ee ciidanka dawlada dhexe Ethiopia. Waxaana la filayaa in ay kulano ku saabsan nabad galiyada iyo horumarinta la qaadan doonaan masuuliyiinta dawlada degaanka Somalida Ethiopia.
Waftiga waxaa ka mid ah taliyaha ciidanka qaranka Jeneral Samora Yunus, la taliyaha Raysal Wasaaraha Ethiopia ee dhinaca nabad galiyada Tsegaye Berhe, taliyaha ciidanka Booliska Janaral Getachew Assefa, wasiirka arimaha dawladaha Dr. Shiferaw Teklemariam iyo taliyaha ciidanka qaybta Koonfur Bari Ethiopia Janaral Abraha Wolde iyo saraakiil kale.
Waa markii ugu horaysay oo magaalada Jijiga ay yimaadaan wafti noocan oo kale mudo labo sano ah. Waxaana la isweydiin karaa sababata keentay wasiirada iyo saraakiishan wada socda xili ay aad u wanaagsan tahay nabad galiyada degaanka Somalida Ethiopia.
Ciidamada Ethiopia oo caawinay kuwa Somaliya ayaa mudaba ku jira gudaha dalka Somaliya, kuwaas oo dhawaan kala wareegay ururka Al shabaab magaalada Baydhaba ee gabalka Bay.
Maalmahan waxaa la is dhex waday warar sheegay in ciidan nabad diid ah ay ka soo degeen xeebta Bali-cad ee magaalada Lughaya maamulka Somaliland.
Wariye Boosh Iyo Xasan oo Hargeysa ku Xidhan, ka Dib Kolkii ay Daabaceen War in Ciidan ay Leedahay UBO ka Soo Dageen Xeebta Maamulak SNM.
Shirkad Ethiopian ah oo Diyaarinaysa Qabashada Aroos 1,000 Qoys ah